Inogona episodic memory uye mazwi ekutaura anofungidzira kuderera kwekuziva? | Kudzidziswa Kwekuziva
Dementia, nemhando dzayo zhinji, inotakura mutoro wakakura pamakumi mashanu emamiriyoni vanhu vakabata vanhu pasi rese, pamwe neyayo vatarisi.
Imwe nhanho yekudzikira kwekuziva inoonekwa sechikamu chekukwegura. Dementia, kune rumwe rutivi, inoita kuti uku kuderera "kuwedzere", zvishoma nezvishoma kudzikamisa ndangariro, kufunga, kutarisa, kuverenga uye kugona kudzidza, kunzwisisa uye kutonga .
Dambudziko rinogara riripo hakusi kwekutsvaga nzira dzekurapa idzva uye dziri nani asi nekutsvaga zviratidzo zvinotitendera kuti tifungidzire kuti ndeapi marudzi ekushomeka kwemunhu anozokudziridzwa muhupenyu hwavo hwese.
Chidzidzo chakaitwa naGustavson nevamwe vake  akatsvaga kuongorora hunyanzvi mune chaiyo neuropsychological bvunzo kufanotaura zvinyoro cuffitive kukanganiswa (MCI) mune vakuru vane hutano. Vanyori vakatarisana episodic memory zvichingodaro semantic fluence sevanogona kufanotaura, pamwe nekudyidzana pakati pezvakasiyana izvi.
Chinhu chinonakidza chekutsvagisa kwavo yaive sarudzo yerimwe bato revanhu kutaura nezvavo: mapatya akasarudzwa kubva kuvarume vaive vashanda muchiuto pakati pa1965 na1975 (makore makumi mashanu neshanu kusvika makumi mashanu nenomwe).
Neuropsychological bvunzo dzaishandiswa kudzora episodic ndangariro uye kutaura kwechirevo, pamwe nekuziva mamiriro, zvese panguva yekutanga kudzidza uye mushure memakore matanhatu-gore. Vanhu chete vane huwandu hwakajairika hwekuziva pabvunzo yekutanga vakasarudzwa kuti vapinde muchidzidzo.
Mushure memakore matanhatu, kwevane 6 vatori vechikamu, makumi masere vakagadzira imwe nzira yeMCI (inenge hafu yavo amnesic); ivo vekupedzisira vaionekwa sevakasiyana nevezera ravo munzira imwe chete: ivo vaive vakuru pane avo vairamba vachiita zvakajairika.
Pakaongororwa mutsauko wekudzidza uku, vanyori vakaona kuti kufambira mberi kweMCI kwakafanotaurwa nechimiro chakaderera mune zvese semantic fluency uye episodic memory pakutanga kwekudzidza. Kunyanya, episodic memory yakaratidzika kufanofungidzira kufambira mberi muMCI amnesic, kunyangwe semantic fluency yakaitawo basa risingataure.
Uyezve, episodic ndangariro, asi hazvireve semantic fluency, yairatidzawo kufungidzira isiri-amnesic MCI, nekudaro ichikurudzira kuti inogona kunge iri mhando yekumuka kwekufona zvakajairika kungwara kuderera pane kungoita munzvimbo dzakanangana nendangariro.
Imwezve inonakidza yekutsvaga ndeyekuti semantic fluency uye episodic memory yairatidzika kunge yakagadziriswa asi ichi chiwanikwa, sekureva kwevanyori, chinogona kutora kubva kune genetic zvimiro kubva pane zvakaitwa mumabvunzo maviri aya nenzira imwecheteyo mune vaviri vaviri mapatya.
Vanyori vakagumisa kuti episodic memory uye semantic fluency inofanira kushandiswa sezviratidzo zviratidzo zvekuderera kwekuziva muvanhuwo zvavo. Kunyangwe kukosha kwe marker Biological yekuongororwa (seye PET mhedzisiro) haigone kurambwa, iyo data yakaratidza kuti neuropsychological bvunzo kazhinji dzinoratidza kuve nani uye nekumberi mafungidziro ekuziva kwekudzikira uye kufambira mberi kwayo mukuderera kweAlzheimer's.
Gustavson nevamwe vake saka vanotenda kuti nzira yakanaka ingangosanganisa ruzivo kubva kune rwemakemikari mamakisi neruzivo kubva mukutsva uye kuyeuka kwemiedzo kuitira kufanotaura kudzikira kwekuziva kwevanhu vane hutano.
Dementia (akapedzisira awana 12 Nyamavhuvhu 2020)
Gustasvon, DE, Elman, JA, Panizzon, MS, Franz, CE, Zuber, J., Sanderson-Cimino, M.,… & Toomey, R. (2020). Sangano rekutanga semantic fluency uye kufambira mberi kune hunyoro hwekuziva kwekukanganisa mune vepakati-vakuru varume. Neurology.
cheAlzheimer, kuderera kwekuziva, dementia, kutaura nemuromo, episodic memory
Inogona kuyeuka episodic uye kutaura kwechienzi kufanotaura kudzikisira kwekuziva?2020-08-212020-09-20http://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2017/08/nuovologo_87e9aa904327d53301f73f9191e17e49.pngKudzidziswa kwekuzivahttps://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2020/08/puzzle-1261138_960_720.jpg200px200px
Verbal episodic memory mune neurodegenerative chirwere: yepamberi kufambira mberi aphasia vs. Alzheimer'sAphasia, Dementia, Mutauro, Ndangariro